Dayax gacmeed dalxiisayaal dayaxa u qaadi doono oo la tijaabiyey | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Dayax gacmeed dalxiisayaal dayaxa u qaadi doono oo la tijaabiyey
Gantaalkan dayax gacmeedka sida oo ay sameeysay shirkadda hawada sare uu leeyahay aasaasaha shirkadda Amazon Jeff Bezos waxaa loo naqshadeeyey inuu 2024-ka uu dalxiisayaal u qaado dayaxa.
Gantaalka New Shephered oo ay naqshadeysay Blue Origin si toos ah ayuu dhulka uga soo dagayaa marka uu hawada sare ka soo laabto.
Dayax gacmeedka waxaa lagu rakkibay Koombiyuutar, iyo barnaamij dayax gacmeedka ka caawinayo degitaanka dhaqdhaqaaqyada kale uu ku sameynayo marka uu hawada sare gaaro.
Nasa waxay dooneysaa sida uu dayax-gacmeedka u shaqeynayo marka hore in dhulka lagu tijaabiyo ka hor inta aan hawada sare loo dirin.
Tijaabada dayax-gacmeedka Talaadada la ganay ayaa noqonaya gantaalkii toddobaad oo Blue Origin ay sameysay ee New Shephered, taasoo ujeedkiisu yahay dhawaan inuu dalxiisayaal uu dayaxa u qaado.
Dayax-gacmeedkan wuxuu awood u yeelan doonaa inuu rakaab uu dhulka ka qaaday uu geeyo masaafo dhulka ka sarreyso 100 km ama 60 mile.
Shirkadda dayax gacmeedkaasi hawada sare u dirtayna waxay sheegtay inuu yahay kii ugu weynaa ee ay diraan. Dayax-gacmeedka iyo gantaalka sida marka ay kala baxaan mashiinta dayax-gacmeedka wuxuu awood u leeyahay inuu keligii dhulka ku soo laabto.
“Tijaabada maanta waxay ahayd mid lagu faano. New Shepherd wuxuu suuragelinayaa macluumaad barnaamijka uu u baahan yahay inuu Mareykanka u keeno,” ayuu yiri Bob Smith oo ah maareeyaha guud ee Blue Origin.
Dayax-gacmeedkana waxaa hagaya koombiyuutar dhammeystiran oo ku shaqeynaya nidaamka algorithms amarradana waxaa fulinaya Koombiyuutarka ku rakkiban.
Ujeeddada ugu weyn ee New Shepherd loo dirayna waxaa lagu sheegay in lagu ogaanayo laba mashiin uu miisaankooda culus yahay sida ay u wada shaqeynayaan.
Qalabka gacanta ka geysanaya nidaamka xog uruurinta waxaa sameeyey hay’adda cilmi-baadhista ee Draper oo hoos tagta Cambridge, Massachusetts. Wuxuuna la shaqeeyaa kaameerooyin uruurinaya xogaha rasmiga ah ee ku hareereysan isla xilliga ay dhacayaan si waafaqsan khariidadda mashiinta dayax-gacmeedka ku rakkiban.
Sababta oo ah wixi hadda ka horreeyey khariidadda noocaasi ah ee dayaxa ku saabsan 1960-yadi waxaa haysatay oo keli ah Nasa xilliga ay Apollo 11 ay caga dhigatay dayaxa oo ay saarnaayeen cirbixiyennada kala ahaa Neil Armstrong iyo Buzz Aldrin.
Blue Origin oo qayb ka ah kooxaha isugu tagay dayax-gacmeedkan in hawada sare loo diro waxay heshiis la gashay hay’adda NASA, iyada oo ku guuleysatay tani iyo 1972-kii iney dayax-gacmeedyo dad siday oo hawada sare loo diray ay ka qayb qaadato.
Gantaalka siday dayax-gacmeedka New Sheppard uu dhirirkiisu yahay 18 miitir waxaa hawada sare loo diray Talaadadi dayax gacmeedka oo gaaray masaafo dhulka ka sarreeyso 105 kiilo mitir.
Previous articleKulan xasaasi ah oo ugu socda Villa Soomaaliya Hogaanka sare ee Dalka
Next articleMadaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo markale weerarry Soomaaliya iyo Ilhaan Cumar.
Madasha Xisbiyada Qaranka oo si Indhala aan u soo dhaweeyey...